4 ku-1 Isizinda Samanzi
4in1 ithangi lamanzi
Idizayini yethu yasekuqaleni kusukela ngo-2020, Isizinda Samanzi Esibunjiwe sokuqala emhlabeni singanelisa izinhlelo zokusebenza ezi-4.Njengelungu elisanda kuzalwa lomndeni wethu wesizinda samanzi, isisekelo samanzi esingu-4in1 sigcina imiklamo yethu yakudala (enamathelayo/ehlanganiswe nesisekelo esiphambene), futhi ingaba yisisekelo sesitendi sophawu.
Njengesisekelo sepulangwe elivamile lefulegi, ingasetshenziswa ne-spindle njengesisekelo sefulegi ngalinye noma njengesisindo sokungeza kusisekelo sokumaka X noma ipuleti lesisekelo sensimbi ukuze kuzinze kangcono.
Njengesisekelo sophawu lwendlela yezinyawo, i-4-5mm ACM blade (iphaneli eyinhlanganisela ye-aluminium) usayizi A1(594*841mm) uyaphakanyiswa.Uphawu Lwendawo Yesithombe: W: 594mm x H: 800mm nhlangothi zombili
Njengophawu lokushwiba, uhlaka lweshubhu yensimbi oluqinile olumbozwe ngempushana, ubude beshubhu buyakhiwa futhi bupakishwe ngaphansi kwesisekelo samanzi ebhokisini elifanayo ukuze kuthuthwe kalula.Usayizi wephaneli ngu-A1(594*841mm).
Njengendwangu yokuma, indwangu yomcamelo eshintshashintshayo.Usayizi ojwayelekile wohlaka lweshubhu yensimbi uyafana nophawu lokushwiba, usayizi wokubonisa ngu-70 * 120cm.Ukuphakama kohlaka lwensimbi kungenziwa ngokwezifiso.
Izicelo ezi-4 ezahlukene endaweni eyodwa yamanzi, eziqalwe yi-WZRODS emhlabeni jikelele
Kulula ukushintsha nokulawula isitoko sakho, yonga ukutshalwa kwezimali kanye nesikhala sesitoko.
Uhlaka lwensimbi olugcwele isisekelo samanzi ekhathoni elifanayo ukuze kuthuthwe kalula
Isisekelo samanzi esitakikela ngesisindo esinzima
I-HDPE engamelana ne-UV, ilungele ukusetshenziswa isikhathi eside ngaphandle
Amasondo angezansi angakusiza ukuthi uwuhambise kalula
Izibani ezikhanyayo ze-LED zisebenza ukuze zikhanyise izimpawu zakho ebumnyameni
Ikhodi Yento Igama Bonisa Uhlelo lokusebenzaGW
I-DW-60 Uphawu lwesisekelo samanzi/Indlela yezinyawo 59x80cm 2.5kg
DW-61 Uphawu lokushwiba 59x84cm 6.5kg
Dw-62 indwangu Ima 70x120cm 6.5kg
Okwedlule: I-Tabletop Beachflag
Olandelayo: Iqoqo Lebhaluni